Dharka carruurta ee dhasha | LIFE PICKER - 2018
Ilmaha dhasha ah
Buufinta ilmaha - waa sifo aan loo baahnayn oo shakhsiyad cusub ah
Ilmaha dhasha ah - oo leh jacayl iyo niyadjab guri kasta
Muxuu ilmuhu u baahan yahay bilaha ugu horreeya ee nolosha? Dabcan, diirimaad waalidnimo, jacayl iyo daryeel! Marka la eego habka daryeelku hadda wax walba waa mid fudud oo casri ah oo ka badan toban sano ka hor. Tusaale ahaan, dhammaan sifooyinka muhiimka ah ee nolosha carruurta: sariiraha, dhalooyinka, isku dhafka, xafaayadda iyo waxyaabo kale oo badan ayaa si sahlan loogu iibsan karaa qaybo kala duwan oo carruurta ah. Iyo ma aha oo kaliya tafaariiqda tafaariiqda. Laakiin sidoo kale dukaamada internetka. Waxayna noloshu u fududeyneysaa hooyooyinka iyo aabaha, sidoo kale waxay badbaadinayaan waqti, lacag iyo dareemo.
Waqtiga ugu badan ee ilmuhu ugu horreyntii ku qaato sariirta. Iyo in uu hubiyo in uu jiro raaxo, raaxo iyo jilicsan - shaqada ugu weyn ee waalidiinta. Bilaha ugu horeeya ee nolosha, jajabka yar yar uma baahna gogosha gebi ahaanba: waxaad u baahan tahay inaad barkimadda isticmaashid kadib markaad sanad jirsato, marmarka qaarkood waxaad cagahaaga ku dhufan kartaa deg deg deg ah, tirada baaldana waxay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqyada degdega ah waxay ka gudbaan dhammaan xuduudaha la taaban karo iyo kuwa aan la isku hallayn karin. Sidaa daraadeed, sifeynta aasaasiga ah ee caanka ah ee gogosha ilmaha ayaa noqda xafaayad ilmaha. Waxaad u baahan tahay inaad doorato kala duwanaansho badan:
Wax laga sameeyey suuf.
Laga soo bilaabo garbaha.
Laga soo bilaabo calico.
Maalmaha qaboobaha, ilmuhu wuxuu ku farxi doonaa in uu qoyo xafaayadda, taas oo si fiican u bixisa oo daboola kulaylka. Tusaale ahaan, garbaha. Maalmaha kulul, waxay ku fiicnaan doontaa in la qaato hawo duug ah oo loogu talagalay xafaayad loogu talagalay dhalaanka cusub ee laga sameeyay suufka ama calico. Dooro on . Waxaa haboon in la xusuusto in nuqulada noocaas ahi ay u baahan yihiin 20 maalintii. Ma dooneysaa inaad ka walwasho kaydka istiraatijiyadeed? Ka dibna u iibso mustaqbalka!
Bakhaarada dukaanka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalaanka iyo carruurta waaweyn ee soo-saarkooda ayaa la soo bandhigay. Nidaamka midabka iyo naqshadaynta xafaayadda ayaa kuu oggolaan doonta inaad doorato habka ugu wanaagsan ee wiilkaaga ama gabadhaada. Go'aanka midabkiisu sarreeyo ama midabka leh - ganacsiga gaar ahaan shakhsi ahaaneed. Si kastaba ha noqotee, ilmuhu wuxuu noqon doonaa mid aad u xiiso leh inuu ku hareer maro geesiyaal caan ah iyo waxyaabo qurux badan. Siyaasadda sicirka ee dukaankeenna internetka ayaa sidoo kale ku farxi doona, shaki kuma jiro. Laga soo bilaabo 33 rubles ee badeecada - tani waa kayd aad u yaab leh oo taxane ah oo aan loo baahnayn oo loogu talagalay yaryar! Waxaan si taxadar leh uula soconaa sifooyinka tayada alaabooyinka iyo bixinta wareegga macaamiisha oo kaliya alaabta laga sameeyay alaabta dabiiciga ah. Dhallaanka noocan oo kale ah ma keeni doono xasaasiyad, caro yaraanta naaska yar. Iyo, sida ay yiraahdaan, ilmaha calool - hooyo faraxsan!